O ry Jean aa! Mba ataovy ambanimbany kely ilay matôsy azafady oo! Izany dridrangilo izany foana ve no ampihenoina vahoaka eto e ?
Mihanahana loatra ka…
Tsy misy ezaka azo atao mihitsy ve manoloana ity fidanganan’ny vola vahiny ity ry mpitondra ? ny fahaizana mihitsy ve no tsy ampy aminareo sa ny fahazotoana hanampy ny vahoaka no tsy misy ?
Efa voaozona ve ?
Raha mba nijery kely tany Ivelany aho ; Nalahelo sy ontsa ery nahatsiaro anao. Ry Tanindrazana Malala tena mafy ady loatra Ry malagasy namako be mpanararaotra.
Managadra ve no atao lahasa e ?
Tena tsy manana fika hafa mba handaniana tena mihitsy ve ianareo ao ry jean forsa fa dia ny fanakanana sy ny fandrahonana no tena stratejia entinareo miady amin’i dada ah ? Dia efa hita izao fa valim-pitsarana navoakan’ny ministra voasazy sy fitondrana voasazy tamin’izany fotoana ve no atao izay ampiharana azy ankehitriny ?
Oh ry Jean a ! ary toa tsy hita popoka tampoka te indray ianareo e, tany atsinanana no nandrenesana anareo farany dia izay no vita..
O ry Jean pan a !
Mety efa fifaliam-be any aminareo any ry Jean pan amin'izao fotoana mampanjombona ny firenena izao a ! Fotoan-dehibe hisehosehoana ato ho ato ho anareo mpanararaotra mody hamonjena sy hampisehoana amin'ny Malagasy rehetra fa olona tsara ianareo. Rehefa andavanandro mantsy ianareo tsy misy apoaka nefa maniry mafy ny hilatsaka hofidiana, hany ka rehefa misy traboina tahaka izao dia andro lehibe ho anareo mba hilazana fa mba olona ianareo.
Karazan-tsakafo ve izany sa inona ? Nangotika ny foko hoe efa drodroky ny kere ny olona any ka ny hanin-ko hanina no ao an-tsainy, saingy tsy misy mamaly a ! Ny tena loza dia tao amin’ny radiom-panjakana mihitsy izy no niantso. Raha tany amin’ny hafa mantsy dia mba azoko nosainina ihany hoe efa fanenjehana be fahatany anareo no betsaka. Dia lasa koa ny saiko taorian’izay hoe inona tokoa moa izany ilay tombotsoan’ny maro fa ny ankabeazanay tambanivohitra dia tsy mahalala ny andinindininy amin’io ? Raha ilay fanazavana hoe fotodrafitrasa mantsy dia tsy ampy satria maro amin’nymala gasy, eny fa na ny ao an-drenivohitra aza no tsy afaka hanitsaka akory izany. Renay mantsy ny fanambaranareo fa tsy azon’ny posy sy sarety ary ny fiara lehibe aleha ireo lalam-baovao mandritra sy aorian’ny frankofonia. Dia mbola hailika indray izany izahay fa ny misy atoraka toa anareo ihany no hisitraka izany. Tsy mba misy iviny kely ho anay mihitsy ve izany izy ity fa dia ny manaiky no mba hany adidinay e ? Efa niteny anareo tamim-pitiavana ihany aho ry Jean hoe aoka izay ity misalobokomana ity saingy tsy masim-bava angamba ka tsy misy mpihaino e ! Adidy ihany ny ahy ka tsy maintsy tanterahiko a ! Tsy mba hihaino ihany ve ianareo ny farany !